Riyada waxay noqotay Talaabada Koowaad ee dhabta ah ee Wadista Cusungöl Cable Car | RayHaber | raillynews
HometareenkaTalaabada ugu horreysa waxaa lagu qaaday Telefoonada Uzungöl
26 / 07 / 2018 tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Tallaabadii ugu horreysay waxaa loo qaaday mashruuca gawaarida fiilada ee loo yaqaan "USB cable project" ee Uzungöl, oo ah xarunta dalxiiska adduunka ee caanka ku ah xudduudda degmada Çaykara ee Trabzon. 2018 Mashruuca xargaha, oo bilaabi doona inuu martidooda martida ah ee Diseembar, wuxuu dhererkiisu noqon doonaa 3 kun oo 540 mitir.
Tallaabadii ugu horreysay waxaa laga qaaday mashruuca xadhigga 2013, kaas oo lagu diyaariyey 5 gudaha Uzungöl, laakiin mashruuca 3, oo la joojiyay inta lagu gudajiray sanadka, ayaa loo tixgeliyey inuu yahay 'riyo'. Mashruuca gawaarida fiilada ee xariga weyn ee xaruntooda ay ku taal cagta ee buuraha Kaçkar, geedka dhicitaanka ayaa lagu dhammeystirey meelaha ay ka heli doonaan ulo. 540 kun oo mitir 55 mitir baabuur ah si looga fogaado waxyeelada geedaha xNUMX geedo hadhuudh ah, ulo ayaa lagu dhex beeri doonaa aagagga bilaabay qodista. Bishii Disembar, 2018 waxay lahaan doontaa baabuurrada 10 ee rakaabka 40.
Şükrü Fettahoğlu, oo ka mid ah la-hawlgalayaasha mashruuca xargaha ee Uzungöl, ayaa sheegay inay bilaabeen mashruuca 2013 iyo inay oggolaadeen mashruuca 2017 iyo inay hiigsanayaan inay fuliyaan waxqabadka saldhigga 2 illaa dhammaadka Diseembar. Fettahoğlu wuxuu yidhi, “2013, waxaan ku bilownay ganacsigan isku dayga isku daygii Madaxweynaheena dambe Recep Kızılcık. 14 Bishii Febraayo 2017 waxaan dhammeynay dhammaan aqoonyahannada waxaanan oggolaaday mashruuceena. Geedaha ulaha meesha ulaha gudban doonaan waa la gooyaa. Qodista ayaa socota. Waxaan qorsheyneynaa inaan saldhigga 2 shaqeyno dhamaadka Diseembar ka dib markii aan saxnay masts-ka. Masaafada u dhaxaysa saldhigyadan 2 waa 2,5 km. Kadib waxaan ku rakibi doonaa 3. Masaafada guud ee saldhigga waxay noqon doontaa 3 kun 540 mitir. Si kale haddii loo dhigo, waa baabuurka ugu dheer masaafo dheer ee Badda Madow. Qiyaasta kharashka waxay noqon doontaa ilaa 300 milyan TL ”.
“Kumanaanka 550 wuxuu ka bilaabmayaa XENUMX
Fettahoğlu wuxuu carrabka ku adkeeyay in 5 ay ku xayiran yihiin carqalado xafiisyada sanadka oo dhan wuxuuna yiri: uz Waxaan higsaneynaa inaan socodsiintaan kor u qaadno bilaha 12. Uzungol 3 waa dalxiis dalxiis oo socodsiiya dayaxa. Waxaan sameynay isku dayyadan si aan ugu faafinno dayaxa 12. In badan ayaan dhibaato ka soo gaarnay xafiiskan sharci-darrada ah. Waxaan ka kireysanay xarunta 3 iyo marinkeeda jardiinooyinka qaranka ee sanadlaha 59 kun ee 800 mitir laba jibaaran. Laakiin inkasta oo aan kireysanay sanadka 29, waxaan awood u helnay kaliya inaan helno laysanka sanadka 29. In kasta oo caqabado xagga sharciga ah ay ka jireen, haddana maalmahan ayaan nimid. Waxaan ku leenahay aag ah xNUMX acres oo saldhiggeena ugu weyn ah. 4 waxay yeelan doontaa aagag adeegga gudaha ah oo ah kun mitir oo laba jibbaaran. Waxaan higsaneynaa inaan dhameyno wiishashka bisha Diseembar. Waxaan ku dhammeyn doonnaa xarunteenna saddexaad ee gu'ga 12. 2 wuxuu noqon doonaa gaari xNUMX ah oo leh shaqsiyad. Martida ayaa halkan ka daawan doonta Uzungöl. ”
X 55 GRAIN TREE GUDDIGA WAA LAGU SAMEEYAAY MASHRUUCKA FARSAMADA "
Fettahoğlu wuxuu xusey in buundada ugu sareysa ay tahay mitirka 65 wuxuuna yiri, yerin Halkii aan ka furi lahayn wado, waxaan geynay geedaha meelaha ulaha kaliya loo isticmaali karo. Markay booqdayaashu fuulaan gaadhiga fiilada, waxay u baahan yihiin inay arkaan dooxada Haldizen iyo xaynta Uzungöl. Cidhibtayada ugu yar waxay noqon doontaa mitir 45 mitirkeedana dhererkiisu wuxuu noqon doonaa mitir 65. Dhirta ugu dheer halkan waa mitirrada 20. Dhamaan dhirtan waxaa si gaar ah u cabiray shirkadda gawaarida fiilada. Waxay ahayd shaqo weyn. Tirada geedaha laga jaray gaariga USB waa 55. Kaynta weligeed waxyeello ma geysan ..
“Mashruucii Shirkadda Taleex lagala socodsiiyay ka dib markii HAYALDİ FURSADAHA KA DHACAY”
Fettahoğlu ayaa yidhi, waxay isku dayayeen inay gaadhiga USB ka samaystaan ​​Garester Plateau oo ku taal buurta ka soo horjeedda sannado, ayuu yidhi Fettahoğlu, 25 waxay isku dayeysay inay ka sameysato gaari koronto ilaa Garester Plateau oo ku taal buurta ka soo horjeedka sanado. Ma jiro saldhig hoose iyo kan sare. Nasiib darrose, qof baa aaday Austria isagoo raadinaya baabuur fiilo leh. Waxaan ka sameysannay gaariga fiilada, halkaan. Aagga ay doonayaan inay ka sameeyaan buurta waa aagga dhul-gariirka. Ma jiro baabuur fiilo leh. Hawshan iyo baahida loo qabo in wax laga qabto dhammaynta Badda Madoow. Waxaan ahay kun sano oo ah 25 illaa iyo hadda waxaan ku maalgeliyey wixii aan ku guuleystay meel ka baxsan gobolkan. Mashruucan xarig-jarka wuxuu ahaa riyo kadibna wuxuu u weecday run att.
9 ayaa bilaabay duulimaad tijaabo ah oo ku saabsan baabuurta cusub ee Uludağ
Wedding at Ordu Boztepe Cable Car